LG K40 na LG K50: Nkọwapụta ọkwa ndị a dị n'etiti | Gam akporosis
LG K40 na LG K50: Ọhụrụ dị n'etiti etiti na nchekwa ndị agha
Eder Ferreño | | LG, Mobiles
LG ga-abụ otu n'ime ụdị ga-adị na MWC 2019, ebe ọ ga-eweta ọhụụ ọhụrụ ya ọhụụ yana ekwentị dị ịtụnanya na ị gaghị emetụ aka iji ya. Agbanyeghị na akara Korea achọghị ichere maka ihe omume na Barcelona iji gosipụta ụdị ọhụụ. Ebe ọ bụ na ha na-ahapụ anyị na ekwentị ọhụrụ ha dị ala, LG K40 na LG K50. Modelsdị abụọ nke anyị nwere nkọwa ha zuru ezu ugbua.
Uzo ohuru ohuru nke ulo oru a putara maka nchebe ndi agha. Ọ ghọrọ ebe nkịtị na ekwentị ama. Ma ọ bụghị, ndị a LG K40 na LG K50 Ha anaghị ahapụrụ gị mmụọ ọjọọ ka ihe gbasara njiri mara. Gịnị ka anyị ga-atụ anya n’aka ha?
Modelsdị abụọ a nwere ụfọdụ ihe jikọrọ, ọ bụ ezie na ha nwere ọdịiche pụtara ìhè. Karịsịa na akụkụ nke ese foto anyị nwere ike ịhụ ọdịiche dị n'etiti LG K40 na LG K50. Mana ha na-ekwe nkwa ịbụ nhọrọ dị mma n’etiti a na gam akporo. Karịsịa maka ndị na-achọ mma na nnukwu nguzogide.
1 Nkọwa LG K40
2 Nkọwa LG K50
Nkọwa LG K40
Nke mbụ n'ime ekwentị abụọ nke akara Korea gosipụtara LG K40. Anyị nwere ike ịtụle ya dịka ezigbo obi abụọ n'ime ha abụọ n'echiche a. Ọ bụ ezie na ọ na-ekwe nkwa inye ndị ọrụ ezigbo arụmọrụ. Ndị a bụ nkọwa ya, gosipụtara ruo ugbu a:
Ihuenyo: FullVision 5,7 sentimita asatọ na mkpebi HD + na 18: 9 ruru
Nhazi: Cores asatọ na 2GHz
Nchekwa ime: 32 GB (Gbasaa ruo 2 TB na microSD)
Rear igwefoto: 16 MP
Igwefoto n'ihu: 8 MP
Batrị: 3.000 mAh
Njikọ: 4G, WiFi, Bluetooth na isi okwu
ndị ọzọ: Onye na-agụ akara mkpịsị aka, bọtịnụ maka Google Assistant, MIL-STD 810G nchedo, DTS :da: X 3D gbara gburugburu
Akụkụ: 153,0 x 71,9 x 8,3 mm
Usoro njikwa: A gam akporo
Ihe nlereanya a dị mfe nke abụọ. Anyị na-ahụ obere ihuenyo na nke a. LG ejibeghị ọkwa a n'ime ya, ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-enwe ekele maka ya. Ọ na-abịa otu nchikota RAM na nchekwa dị n'ime. Nchekwa nke anyị nwere ike ịgbasa budata ekele maka microSD.
Batrị nke LG K40 a nwere ikike nke 3.000 mAh, nke ụkpụrụ kwesịrị zuru ezu maka ngwaọrụ ahụ. Amabeghị ma ọ ga-akwụ ụgwọ ngwa ngwa ma ọ bụ na ọ gaghị. Enwere ike igosi nkọwa ndị ọzọ gbasara ngwaọrụ ndị a n'ime ụbọchị ole na ole. Banyere igwefoto, ngwaọrụ a na-abịa site na ihe mmetụta n'ihu na nke azụ.
Maka ndị ọzọ, anyị na-ahụ onye na-agụ akara mkpịsị aka n'azụ, nchekwa ndị agha ahụ ekwuru na mbụ, gbakwunye bọtịnụ anụ ahụ maka Google Assistant. Ọzọkwa dị na LG K40 a, na-arịwanye elu na smartphones nke ika Korea.
Nkọwa LG K50
Na nke abụọ anyị hụrụ LG K50 a. Ngwaọrụ a buru ibu karịa nke mbụ, na mgbakwunye inwe igwefoto nwere okpukpu abụọ. Ya mere, anyị pụrụ ịhụ na ọ bụ a nzọụkwụ n'elu aga na ngwaọrụ. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke ekwentị:
Ihuenyo: FullVision 6,26 sentimita asatọ na mkpebi HD + na 19,5: 9 ruru
Rear igwefoto: 13 + 2 MP
Igwefoto n'ihu: 13 MP
Batrị: 3.500 mAh
Akụkụ: 161,3 x 77 x 8,7 mm
Isi ihe dị iche na ama ndị ọzọ na-elekwasị anya na ihuenyo ya, na mgbakwunye na nha a LG K50 anyị nwere ọnụnọ nke notch, n'ụdị otu ntapụ mmiri na ya. Ihuenyo buru ibu, nke na-ewe ihe ka ukwuu n'ihu. Enweghị ihe ọ bụla e kwuru, mana ọ dị ka ngwaọrụ abụọ ahụ na-eji otu nhazi ahụ.
Agbanyeghị na LG K50 a anyị nwere nnukwu RAM, ọ bụ ezie na ọ na-abịa na otu Nchikota RAM na nchekwa. Anyị nwekwara bọtịnụ maka Google Assistant, otu nchebe ndị agha na ọnụnọ nke ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na ekwentị. Batrị ya dị ntakịrị karịa nke ụdị nke ọzọ, nwere ike nke 3.500 mAh.
Na azụ anyị na-ahụ igwefoto abụọ, 13 + 2 MP n'okwu a. N'adịghị ka ụdị nke ọzọ nke nwere otu ihe mmetụta. Ọzọkwa, ya n'ihu igwefoto ka mma na nke a kwa.
Ọ bụ ezie na anyị nwere ihe niile nkọwa ya, n'oge ahụ enweghị ozi ọ bụla na mwepụta nke LG K40 na LG K50 na ahịa. Ihe niile na-egosi na LG ga-ewetara anyị ngwaọrụ ndị a na MWC 2019, yabụ anyị nwere ike ịmatakwu banyere ya na mmemme a na Barcelona. Mana ka ọ dị ugbu a abụghị ihe akwadorokwa. Ya mere, anyị nwere olile anya ịmatakwu banyere ya n'ime awa ole na ole sochirinụ. Enweghi kwa data banyere ego ha nwere ike.
Kedu mmetụta ndị ọhụụ ọhụrụ ndị a sitere na ụlọ ọrụ Korea hapụrụ gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG K40 na LG K50: Ọhụrụ dị n'etiti etiti na nchekwa ndị agha
World of Legends bụ MMORPG ọhụrụ iji lezie anya
Nke a bụ ihe nchọgharị weebụ kachasị mma maka gam akporo nke oge a